12 Miriam na Erọn wee malite ikwu okwu megide Mozis n’ihi nwaanyị ọ lụrụ nke bụ́ onye Kush, n’ihi na nwaanyị ọ lụrụ bụ onye Kush.+ 2 Ha wee na-ekwu, sị: “Ọ̀ bụ naanị site n’ọnụ Mozis ka Jehova kwuworo okwu? Ó sibeghị n’ọnụ anyị onwe anyị kwuokwa okwu?”+ Jehova nọkwa na-ege ntị.+ 3 Ma nwoke ahụ bụ́ Mozis dị nnọọ umeala n’obi+ karịa mmadụ niile nọ n’elu ala. 4 Na mberede, Jehova gwara Mozis na Erọn na Miriam, sị: “Unu atọ, gaanụ n’ụlọikwuu nzute.” Ha atọ wee gawa. 5 E mesịa, Jehova gbadatara n’ogidi ígwé ojii+ wee guzo n’ọnụ ụzọ ụlọikwuu ahụ kpọọ Erọn na Miriam. Ha abụọ wee gawa. 6 O wee gaa n’ihu ịsị: “Biko, nụrụnụ okwu m. Ọ bụrụ na unu enwee onye amụma nke ga na-eburu Jehova amụma, ọ bụ n’ọhụụ+ ka m ga-eme ka ọ mara m. Ná nrọ+ ka m ga-agwa ya okwu. 7 Ọ dịghị otú ahụ n’ebe Mozis+ ohu m nọ! A na-enyefe ụlọ m dum n’aka ya.+ 8 M na-agwa ya okwu ihu na ihu,+ si otú ahụ na-egosi ya ihe n’ụzọ doro anya, ọ bụghị n’ilu;+ ọ na-ahụkwa ọdịdị Jehova.+ Gịnị mere egwu atụghị unu ikwu okwu megide ohu m bụ́ Mozis?”+ 9 Jehova wee weso ha iwe dị ọkụ, o wee pụọ. 10 Ígwé ojii ahụ wee si n’elu ụlọikwuu ahụ pụọ, ma, lee! e tiri Miriam ekpenta nke na-acha nnọọ ọcha.+ Erọn wee lee Miriam anya, ma, lee! e tiri ya ekpenta.+ 11 Erọn gwara Mozis ozugbo, sị: “Biko, onyenwe m! Biko, gbaghara anyị mmehie a nke anyị zuzuru nzuzu mee!+ 12 Biko, ka ọ ghara ịnọwa dị ka onye nwụrụ anwụ,+ bụ́ onye akụkụ ahụ́ ya richara ericha mgbe o si n’afọ nne ya na-apụta!” 13 Mozis wee malite itiku Jehova, sị: “Biko, Chineke! Biko, gwọọ ya!”+ 14 Jehova wee gwa Mozis, sị: “Ọ bụrụ na nna ya agbụọ ya ọnụ mmiri+ n’ihu, ọ̀ bụ na ọ gaghị ebu ihere ruo ụbọchị asaa? Kpọpụnụ ya iche+ ná mpụga ebe unu mara ụlọikwuu+ ruo ụbọchị asaa, e mesịakwa, na-abatanụ ya.”+ 15 E wee kpọpụ Miriam iche ná mpụga ebe ha mara ụlọikwuu ruo ụbọchị asaa,+ ha akwalighịkwa ruo mgbe a nabatara Miriam. 16 E mesịa, ha si na Hazirọt+ kwalie wee maa ụlọikwuu n’ala ịkpa Peran.+